[ Jan 23, 2022 ] सरकारी विद्यालयभित्रै निजी बोर्डिङ
पोखरा । आधुनिक शिक्षाको प्रारम्भ भएको पोखराकै ऐतिहासिक विद्यालय राष्ट्रिय माविको हाताभित्रै यस्तो दृश्य देखिन्छ, जुन दृश्यले सरकारी शिक्षा क्षेत्रकै बद्नामी गरिरहेको छ । कसरी सरकारी विद्यालयहरु कमजोर बनाएर निजी विद्यालय फस्टाइरहेका छन् ? त्यो बुझ्न पोखरा-१ टुँडिखेलको राष्ट्रिय मावि र बगरस्थित सँस्कृति मावि हेरे पुग्छ ।
[ Jan 22, 2022 ] संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यको सुझाव : संविधानले तोकेकै समयमा चुनाव गर
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले संविधानले तोकेकै समयमा निर्वाचन गराउन दलहरूलाई सुझाव दिएका छन्। सत्ता गठबन्धनका दल तीनै तहका निर्वाचन एकैपटक आगामी मंसिरमा गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको खबर सार्वजनिक भएका बेला संविधानविद् आचार्यले शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत संविधानले न चाँडो (अर्ली) न…
[ Jan 22, 2022 ] दशगजा क्षेत्रमा एसएसबीको सुरक्षा पोष्ट
विराटनगर । भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले दशगजा क्षेत्रमा सुरक्षा पोष्ट खडा गरेको छ । विराटनगर महानगरपालिकाको सिमावर्ती दशगजा क्षेत्र (नो मेन्स ल्याण्ड) मा एसएसबीले सुरक्षा पोस्ट खडा गरेको हो । विराटनगर महानगरपालिका-१६ दरैया र भारत जोगवनीस्थित टिकुलिया…
[ Jan 22, 2022 ] मधेस प्रदेश : प्रमुख सचिव जानै मान्दैनन्, जाने टिक्दैनन्
प्रमुख सचिव नहुँदा मधेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयको अवस्था दयनीय बनेको छ। कार्यालय अनिर्णयको बन्दी बन्दा सरकारका काम प्रभावित भएका छन्। कार्यालयमा प्रमुख सचिव नहुँदा दर्ता–चलानी लगायतका काम बाहेक अन्य कामहरु प्रभावित बनेका कार्यालयका निमित प्रमुख…
[ Jan 22, 2022 ] सत्ता गठबन्धनको निष्कर्ष : तीनै तहको निर्वाचन एकै पटक
देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आगामी वर्ष निर्वाचन हुने भएकाले पूर्वतयारी थाल्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए लगत्तै बसेको सत्ता गठबन्धनले तीनै तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने समझदारी जुटाएको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा…
[ Jan 21, 2022 ] आगामी तीन दिनसम्म मौसम सुधार नहुने
काठमाडौं । आगामी तीन दिनसम्म मौसममा उल्लेखनीय सुधार हुने सम्भावना नरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । नेपालमा पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण देशभर नै मौसममा बदली भएको छ । केही स्थानहरुमा वर्षा र हिमपात पनि भइरहेको…
[ Jan 16, 2022 ] पोखराका सरकारी जग्गा कब्जा गर्दै भाडामा लगाउँदै राजनीतिक दलका भातृ संस्था
प्रमुख दलहरू नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका भातृसंस्थाले पोखराका सार्वजनिक जग्गा वर्षौंदेखि कब्जा गरेको पाइएको छ। एमाले र कांग्रेसका भातृसंगठनले ती जग्गामा बनाइएका भवन भाडामा लगाएर व्यापार गरिरहेको समेत भेटिएको हो। पोखराको पृथ्वी चोकस्थित बस बिसौनीबाट…
[ Jan 16, 2022 ] प्रदेश २ को स्थायी राजधानी र नाम : जुटेन सहमति, के होला परिणाम?
प्रदेश २ को नाम र स्थायी राजधानी टुंगो लगाउन सभामुख सरोजकुमार यादवको संयोजकत्वमा गठित विशेष समिति सहमतीय प्रयासमा असफल भएको छ। नाम र राजधानी सम्बन्धी केही प्रस्तावहरू परिमार्जन गरेर घटाउन सके तापनि कुनै एउटा नाम र राजधानीको प्रस्तावमा सहमति जुटाउन नसकेको हो।
[ Jan 14, 2022 ] बाघको डरले घरभित्रै ‘दिसा–पिसाब’ घरघरै धुनी
राप्तीसोनारी गाउँपालिका–६, हब्रहवाका रामप्रसाद थारू साँझ पर्ने बित्तिकै घरभित्र पस्छन् । बिहान नहुँदासम्म रामप्रसादका परिवार घरबाहिर निस्किँदैनन् । राति दिसा र पिसाब लागेमा उनीहरूले भित्रै व्यवस्थापन गर्छन् । रामप्रसाद भन्नुहुन्छ– ‘घरबाहिर बाघ आउँछ भन्ने डर हुन्छ । साँझ घरभित्र पसेपछि एकैपटक बिहान बाहिर निस्किन्छौं । दिसापिसाब लागेमा भित्रै…
[ Jan 14, 2022 ] नायिकाको डोल्पा डायरी : खुसी खोज्ने हो भने कर्णाली जानू
काठमाडौं । अहिले कर्णाली क्षेत्रमा निकै कष्ट छ । डाँडापाखामा सेतमम्मे हिउँ छन् । चौंरी र भेडा लिएर लेक चढेकाहरू भटाभटी बेसी झर्दै छन् । जाडो असाध्यै बढेको छ । कति ठाउँमा तापक्रम माइनसमा छ । उकालो ओरालो…
[ Jan 14, 2022 ] सीमा विवादमा सरकारी मौनता
वर्तमान नेपालको भौगोलिक सिमानाको अवस्थाको निर्धारण सुगौली सन्धिले गरेको हो। सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिस इन्डिया कम्पनीबीच युद्ध भयो। नेपालीहरूले बहादुरीपूर्वक लडे पनि युद्धमा नेपालले पराजय भोग्नु पर्‍यो। पराजयपश्चात् एक सम्झौता भयो जसअनुसार वर्तमान नेपालको सिमाना सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुर तथा मध्यपश्चिमका बाँके र…
[ Jan 13, 2022 ] प्रहरीले कसरी निर्दोषलाई लागूऔषध मुद्दामा फसाउँछ ?
काठमाडौं । आफूहरुले बोक्दै नबोकेको ब्राउन सुगर (लागूऔषध)को झुटो मुद्दाका कारण दुई भारतीय नागरिकले अनाहकमा साढे ९ वर्ष जेलमा विताएका छन् । २२ वैशाख २०६९ मा पोखराबाट पक्राउ परेका उनीहरु ४ कार्तिक २०७८ को सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट मात्रै थुनामुक्त हुन पाए ।